FARO dia hampiseho ny teknolojia 3D fahitana azy ho an'ny geospatial sy ny fananganana amin'ny World Geospatial Forum 2020 - Geofumadas
Janoary, 2020 GPS / Fitaovana, fanavaozana
Ho fanasongadinana ny hasarobidin'ny teknolojia geospatial ao amin'ny toekarena nomerika sy ny fampidirana azy ireo miaraka amin'ireo teknolojia mipoitra amin'ny sehatry ny asa isan-karazany, ny fivoriana isan-taona ny World Geospatial Forum dia hatao amin'ny volana aprily.
FARO, loharano azo itokisana indrindra eto an-tany amin'ny fandrefesana 3D, ny haitao ary ny teknolojia fanatanterahana, dia nanamafy ny fandraisany anjara amin'ny World Geospatial Forum 2020 ho toy ny Corporate Sponsor. Ny hetsika dia hatao amin'ny 7-9 aprily 2020 ao amin'ny Taets Art & Event Park, Amsterdam, Netherlands.
FARO dia mitondra fahitana sy lanja lehibe amin'ny fananganana sy ny fizarana ara-jeôgrafia miaraka amin'ireo vahaolana ao amin'ny Digital Construction, Digital Twins, Cloud Collaboration, High-Speed ​​Reality Capture, sy maro hafa. Ireo delegasiona ao amin'ny World Geospatial Forum dia afaka hiaina ireo vahaolana ireo sy ireo tranga fampiasan'izy ireo ao amin'ny trano fampirantiana FARO, ary koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny lahateny samihafa amin'ny programa indostrialy.
"Ny World Geospatial Forum dia toerana hihaonana amin'ireo mpitarika hevitra ary hiresaka momba ny fironana farany eo amin'ny sehatry ny jeografia sy ny fanodidinana ny fizotran'ny asa ao amin'ny maritrano, ny injeniera ary ny fanamboarana aho," hoy i Andreas Gerster, filoha lefitra ny varotra manerantany ny fanamboarana BIM. “FARO dia iray amin'ireo mpamily farany fanavaozana hatramin'ny andro voalohan'ny nomerika. Ny World Geospatial Forum dia ahafahantsika manolotra vahaolana farany momba ny fitaovana sy rindrambaiko izay manome antoka fa mpanjifa an'arivony manerantany no mahazo tombony amin'ny fakana angon-drakitra 3D avo lenta, fanodinana angon-drakitra haingana sy mora, fampihenana ny vidin'ny tetikasa, ary ahenao ny fako ary mampitombo ny tombom-barotra. Manantena ny hiresaka amin'ny mpanatrika anao momba ny orinasanao izahay ary hiresaka ny fomba hanampian'ny FARO anao amin'ny fampivoarana ny fizotran'ny asa. ”
Ny vahaolana teknolojia 3D an'ny FARO dia nahasarika lehibe ny indostrian'ny maritrano, ny fananganana ary ny injeniera (AEC) ao amin'ny World Geospatial Forum nandritra ny taona maro. Ny fahaiza-mitarika ao amin'ny orinasa dia tsy vitan'ny hoe mitondra ny fananganana ara-jeôgrafika ao amin'ny AEC fotsiny, fa lasa mpamily fototra satria ny indostria dia miroso hatrany amin'ny fanaovana nomerika.
"Hatramin'ny taona vitsy lasa izay, ny Geospatial Media dia nifantoka tamin'ny fampiroboroboana ny fisianay eo amin'ny tsenan'ny AEC, satria mino izahay fa ny teknolojia geospatial dia lasa antony lehibe amin'ity sehatra ity. Reharehantsika izahay ary adidintsika ny miantehitra amin'ny fanohanan'ny FARO mandritra an'io ezaka io ary manantena fiaraha-miasa mahasoa miaraka amin'ny FARO amin'ny World Geospatial Forum amin'ity taona ity, "hoy i Anamika Das, filoha lefitry ny fampandrosoana sy fandrosoana momba ny asa aman-draharaha sy ny serasera Geospatial. .
Momba ny FARO
FARO® no loharano azo itokisana indrindra manerantany ho an'ny teknolojia fandrefesana, fitarafana ary fanatanterahana 3D. Ny orinasa dia mamolavola sy manamboatra vahaolana manaparitaka izay mamela ny fisamborana, fandrefesana ary fandinihana 3D avo lenta amin'ny indostria isan-karazany, ao anatin'izany ny famokarana, ny fanamboarana, ny injeniera ary ny fiarovana ny besinimaro. Ny FARO dia manome ny matihanina AEC ny teknolojia fanaovana fanadihadiana tsara indrindra ary manondro lozisialy fanodinana rahona izay ahafahan'izy ireo mitondra ny tranokalan'izy ireo sy ny fotodrafitrasa ho any amin'ny tontolon'ny nomerika (mandritra ny dingana rehetra amin'ny tsingerim-piainany). Mahazo tombony amin'ny mpanjifa AEC ny kalitao avo lenta, feno ny angon-drakitra, ny fizotrany haingana, ny fihenan'ny vidin'ny tetikasa, ny fako mihena ary ny fitomboan'ny tombom-barotra.
Momba ny Forum Geospatial World
Ny World Geospatial Forum dia fivoriana isan-taona misy olona matihanina sy mpitarika geospatial maherin'ny 1500 izay misolo tena ny tontolo iainana ara-tontolo iainana: politika ho an'ny daholobe, masoivoho amin'ny sarintany nasionaly, orinasam-panjakana tsy miankina, fikambanana iraisam-pirenena sy fampandrosoana, andrimpanjakana siantifika sy akademika ary ambonin'izany rehetra izany. , mpampiasa farany ny governemanta, ny orinasa ary ny serivisy ho an'ny olom-pirenena. Miaraka amin'ny lohahevitra 'Manova toekarena amin'ny vanim-potoana 5G - Ny fomba geospatial', ny andiany faha-12 amin'ny kaonferansa dia hanasongadinana ny lanjan'ireo haitao ara-jeôgrafika amin'ny toekarena nomerika sy ny fampidirana azy amin'ireo teknolojia vao misondrotra toa ny 5G, AI, fiara mizaka tena, Big Data, Cloud, IoT ary LiDAR amin'ny indostrian'ny mpampiasa isan-karazany, ao anatin'izany ny tanàn-dehibe nomerika, ny fananganana sy ny injeniera, ny fiarovana sy ny fiarovana, ny fandaharam-pivoarana manerantany, ny fifandraisan-davitra ary ny faharanitan-tsaina. Mianara bebe kokoa momba ny fihaonambe amin'ny www.fianatfom.it
Ity forum malaza ity dia hanitatra fahalalana momba ny sakany sy ny tombotsoan'ny teknolojia ara-jeografia ary hanolotra vahaolana mety sy mahomby izay mandray anjara amin'ny fanatsarana ny toerana manodidina antsika.
Previous Post«Previous Inona no atao hoe mitokana - karazana sy fampiharana
Next Post Digital Twin - Philosophy ho an'ny revolisiona nomerika vaovaomanaraka »